သတ္တုတွင်း တစ်ခုမှာ အသုံးပြုဖို့ အတွက်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကားအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ Toyota Land Cruiser ! – MyMedia Myanmar
သတ္တုတွင်း တစ်ခုမှာ အသုံးပြုဖို့ အတွက်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကားအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ Toyota Land Cruiser !
ဂျပန် ကားကုမ္ပဏီ Toyota ရဲ့ နာမည်ကျော် Land Cruiser နဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ ကို သတင်း ခေါင်းစဉ် တစ်ခုထဲမှာ အတူတူတွဲမြင်ရမယ့် အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ မခန့်မှန်း ထားခဲ့မိ‌တာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါအချိန်က အခု တကယ် ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါပြီ။ Toyota ရဲ့ တရားဝင် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲကနေ ကြားသိလိုက်ရတဲ့ အဆိုပါ သတင်း ကတော့ ပိုပြီး ကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာမလား ၊ ဒါမှမဟုတ် ထင် ထားသလောက် ရော ဖြစ်လာပါ့မလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ Toyota Australia ကတော့ BHP နဲ့ ပူးပေါင်း လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီက ဩစတြေးလျရဲ့ သဘာဝရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ အခုလို ပြောင်းလဲလိုက်မယ့် လျှပ်စစ်ကားအတွက် စမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့ သဘောတူ ညီလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မို့လို့အခု ဆိုရင် Land Cruiser 70 Series ကို လျှပ်စစ်ကား တစ်စီးအသွင် ပြောင်းလဲပေးလိုက်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အခုလို စမ်းသပ်မယ့် အပိုင်းဟာအရေအတွက် အနည်းငယ်ပဲ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း သတ္တုတွင်းမှာတော့ ပြောင်းလဲထား တဲ့ နမူနာကား တစ်စီးကိုပဲ အရင်ဆုံး အသုံးပြုဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Single Cab Land Cruiser 70 Series တွေကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကားအဖြစ် စတင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာ ရှိတဲ့ ဩစတြေးလျရဲ့ Product Planning And Development Division မှာပဲ တရားဝင် ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ပြောင်းလဲ ထားတဲ့ BEV အမျိုးအစား ကတော့ မြေအောက် သတ္တုမိုင်းတွင်းလုပ်ငန်း တွေအတွက် ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပြီး တော့ အနောက်ဘက် ဩ‌စတြေးလျမှာ ရှိတဲ့ BHP ရဲ့ အနောက်ဘက် နီကယ်သတ္တုတွင်းမှာ စမ်းသပ်မှုတွေ စတင် ပြုလုပ် နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အခုလိုမျိုး Toyota Australia နဲ့ BHP တို့ ရဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုရဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ Light-Duty ယာဉ်အုပ်စုမှာ ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှုကို လုံးဝ လျှော့ချနိုင်ဖို့ အတွက် စီစဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု ကြားက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နေမှုဟာ အခုမှ စတင်တာ မဟုတ်ပဲ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် အထိကိုကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ ရှိနေခဲ့ပြီးသား ဖြစ်တာကြောင့် အခုစီမံကိန်းကလည်း ဆက်ဆံရေး ကိုပါပိုပြီး တိုးတက် သွားစေ သလို အနာဂါတ် ကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ဆို တာကို ပြသနိုင်ရာလည်း ရောက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန် ထိတော့ ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားနှာ ရောင်းချသုံးစွဲနေတဲ့ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်တွေ ဟာ ဒီဇယ် စွမ်းအင်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခုလို စမ်းသပ်မှုသာ အောင်မြင်သွားမယ် ဆိုပါက သတ္တုမိုင်းတွင်း လုပ်ငန်းတွေမှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Land Cruiser က အသုံးတည့်တယ် ဆိုတာ ကိုလည်း သက်သေပြရာ ရောက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် မို့လို့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒီဇယ်စွမ်းအင်ကို အများအပြား မှီခိုနေရတဲ့ အခြေအနေကိုပါလျှော့ချပေးရာလည်း ရောက် ကာ လာမယ့် ၂၀၃၀ မှာ ကာဗွန် ထုတ်လုပ်မှုကို ၃၀ ရာနှုန်းအထိ လျှော့ချမယ် ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လတ်တလော ရည် မှန်းချက် ကို လည်း အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်ဦးမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို အရေအတွက် အနည်းငယ်နဲ့ပဲ စမ်း သပ် ဦးမယ့် အစီ အစဉ် ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေအထား တွေကိုတော့ Toyota Australia ဆီက နေဆက်လက် ကြားသိရဦးမှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရဲ့ သတ္တုတွင်းယာဉ်တွေ ကဏ္ဍမှာလျှပ်စစ် ကားတွေကို မိတ်ဆက် သုံးစွဲလာနိုင်မယ့် အနေအထား ထိ ခန့်မှန်း လို့ ရတော့မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post သတ္တုတွင်း တစ်ခုမှာ အသုံးပြုဖို့ အတွက်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကားအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ Toyota Land Cruiser ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-11T16:33:20+06:30January 11th, 2021|MYCARS MYANMAR|